Cabdi iley oo diyaarad uu Addis ababa karaacay isagoon kadigin dib ula noqday. | ogaden24
Cabdi iley oo diyaarad uu Addis ababa karaacay isagoon kadigin dib ula noqday.
Madaxa maamulka Jigjiga ayaa si dhuumasha ah kaga baxay magaalada Addis ababa isaga oo sii raacay diyaarada Rakaabka ee u baxda Gobolada wadanka Ogadenia.
Horjooge Cabdi iley ayaa kadib markii ay fashilmeen wada hadalo u dhexeeyay isaga iyo Horjoogaha maamulka Oromada Habeenimadii Sabtidu soo galaysay, waxaa uu isla subaxnimadii Sabtida Horay karaacay diyaaradii u baxaysay Jigjiga.
Bixitaanka Cabdi iley oo la ogaaday xili ay diyaaradu Gashay Hawada magaalada Diridhaba ayaa lagu amray inuusan kadagin diyaarada ee uu isla iyada dib ugu soo noqdo, waxaana uu magaalada Jigjiga sii joogay intii diyaaradu kasoo Laabanaysay magaalada Godey, taasi oo markii duhurnimadii ay kusoo Laabatay Jigjiga uu dib ugu raacay Addis ababa.
Amarka khasabka ah ee Horjooge Cabdi iley dib loogu celiyay magaalada Addis ababa ayaa kasoo baxay xafiiska Xayle Maryan, waxaana sida xogta aanu helay sheegayso amarkaasi ku xumaaday saraakiisha ciidamada Woyanaha oo xidhiidh wanaagsan kala dhexeeyo Cabdi iley.
Bixista uu Cabdi iley sida dhuumashada ah kaga baxay magaalada Addis ababa isagoo aysan waxba kala socon kooxda EPRDF, ayaa Guul siyaasadeed u noqotay madaxa maamulka Oromada oo ay kala dhaxayso colaad ba’an oo kadhalatay dagaalada kasocda deegaamada Labada Ummadood ee Woyanuhu Horjoogayaasha uga dhigtay.